DEG DEG:- Ciidamo uu wato madaxweynaha Galmudug oo goordhaw dib ula wareegay deegaanka Godinlabe – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidamo uu wato madaxweynaha Galmudug oo goordhaw dib ula wareegay deegaanka Godinlabe
Waxaa goordhaw deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud gaaray ciidamo aad u badan uu la socdo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, halkaas oo maanta dagaal aad u xoogan uu ku dhexmaray ciidamada Galmudug iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca.
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo ay la socdaan ku-xigeenkiisa Maxamed Xaashi Carabeey iyo ciidamo aad u badan islamarkaana u muuqda inay dagaal usoo diyaar garoobeen ayaa gudaha u galay deegaanka Godinlabe.
Ciidankii Ahlu-sunna ee saakay la wareegay deegaanka Godinlabe ayaa la sheegayaa inay halkaasi gebi ahaan isaga baxeen, kadib markii ay halkaasi dagaal aad u culus oo muddo kooban socday ay la galeen ciidanka uu horkacaayo madaxweyne Guuleed.
Warar hoose aynu heleyno ayaa sheegaya in ciidanka Ahlu-sunna ay u ruqaansadeen dhinaca magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan duuleedka deegaanka Godinlabe.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Godinlabe ku geeriyootay ilaa 4 qof oo uu ku jiro taliyihii ciidanka Ahlu-sunna Waljameeca Axmed Dheere iyo dhinacyadii dagaalay, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay tiro intaasi ka badan, inkastoo aan la xaqiijin karin inta ay tiradaasi gaarsiisan tahay.
Si kastaba ha ahaatee, xiisada dagaaleed ee deegaanka Godinlabe ayaa sida la sheegay timid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda Galmudug ay weerar ku qaadeen koox maleeyshiyo ah oo isbaaro dhigatay deegaanka Godinlabe, waxaana markii dambe dagaalkaasi kusoo biiray ciidanka maamulka Ahlu-sunna Waljameeca, oo deegaankaasi muddo saacado ah gacanta ku haayay.